Banky iraisam-pirenena sy Banky iraisam-pirenena
Ny kaonty amin'ny Banky Iraisam-pirenena dia kaonty banky any amin'ny firenena hafa ankoatra ny maha olom-pirenena anao. Banky iraisam-pirenena, na a banky offshore, matetika dia manondro kaonty nosokafana tany amin'ireo toeram-pialofana ara-bola toa ny iray amin'ireo nosy Karaibeana, Cyprus, Luxembourg na Soisa. Ny fepetra -dranomasina niainga tany Grande-Bretagne ary tany am-boalohany dia nantsoina tamin'ny banky izay tsy hita tao. Araka ny rakibolana Merriam-Webster, ny eny ivelany dia midika hoe "mipetraka na miasa any amin'ny firenena vahiny."
Angamba ny 50 isan-jaton'ny renivola eran-tany dia mivezivezy amin'ny banky any ivelany. Ireo sehatra momba ny banky ireo dia manome tsiambaratelo manokana, lalàna miaro mafy kokoa ary ny fahazoana ny tahiry eran-tany. Matetika ny olona dia mampiasa banky iraisam-pirenena ho fiarovana ny fananana amin'ny raharaha, raha miaraka amin'ny fitokisana na orinasa any ivelany.
Banky Offshore Account Opening
Ny fanokafana kaonty banky iraisampirenena dia tsy mitovy amin'ny fisokafan'ny kaontinao. Mila manome antontan-taratasy misimisy ihany ianao. Manome ny mombamomba anao sy ny mombamomba anao ianao, referensi na roa ary ny tahiry fanokafana. Rehefa manokatra kaonty banky any ivelany ny banky, amin'ny ankapobeny dia mitaky dika mitovy amin'ny pasipaoronao. Ho fanampin'izany, mila porofo ny trano hipetrahana ianao, toy ny volavolan-dalàna momba ny utility, anisany entana vitsivitsy. Ireo zavatra tokony homenao dia miankina amin'ny fangatahan'ny andrim-panjakana sy ny fitsipika eo an-toerana sy iraisam-pirenena.
Ny banky any ivelany dia mety mangataka antontan-taratasy avy amin'ny bankinao ankehitriny. Raha efa manana kaonty banky amin'ny banky hafa ianao dia mahita anao tsy dia atahorana intsony ny banky iraisam-pirenena. Afa-po amin'ny ankapobeny ity takiana ity amin'ny alàlan'ny famoahana taratasy fanamarinana avy amin'ny bankinao izay ampiasainao amin'izao fotoana izao.
Amin'ny toe-javatra sasany, ny banky amoron-dranomasina dia mety te-hanamarina ny loharanom-bola miditra amin'ny kaonty. Mety hijerena ny karazan'entana andrasana hampiasaina izy ireo. Natao ho fiarovana ny banky izany. Ny antony dia iharan'ny fanerena be loatra ny banky eo ampitan'ny tanàna mba hiantohana azy ireo tsy hanao hetsika tsy ara-dalàna. Raha tsy izany, mampidi-doza ny fahazoana karama na fatiantoka amin'ny fahazoan-dàlana ara-bola.
Raha miasa ianao, ny valin'ny karama dia tokony hanaporofo fahafaham-po amin'ny fanamarinana famatsiam-bola. Ny vola amin'ny fifanakalozana trano na asa aman-draharaha dia mety mitaky porofo ny niaviany tamin'ny alàlan'ny fifanarahana, fanakatonana ny antontan-taratasy sy ny toy izany. Tokony ho ampy ny taratasy avy amin'ny orinasa fiantohana rehefa mametraka vola avy amin'ny fifanarahana fiantohana. Raha mandova io vola io dia afaka mandefa taratasy any amin'ny banky ny manampahefana na mpitantana manokana ny toekarena. Ny banky ivelany dia mety hanontany momba ny fidiram-bolanao ary amin'ny toerana misy anao ireo fampiasam-bola.
Ny tombony amin'ny fananana ny orinasa Offshore dia mampiorina ny kaontinao satria mpahazo fampahafantarana isika. Noho izany, afaka mametraka ny kaontinao ho anao amin'ny sehatra maro izahay fa tsy mila mandeha any ivelany ianao.
Rehefa misosa amin'ny sehatra iraisam-pirenena ianao dia manararaotra tombontsoa isan-karazany amin'ny firenena vahiny. Amin'ny tany sasany offshore bank Zava-dehibe tokoa ny tsiambaratelo, ny fampahafantarana ny antoko tsy nahazoana lalana dia heloka amin'ny mpiasa ao amin'ny banky. Ny kaonty banky iraisampirenena dia mety ho fitaovana manokan'ny fiarovana manokana. Mba hampitomboana ny fiainanao ara-bola dia manokatra ny kaontin'ny banky amin'ny anaran'ny orinasa iray any ivelany ianao.
Miankina aminao ny firenena ny tombontsoa hetra tianao. Ny olona amerikana, ohatra, dia hetra amin'ny vola miditra manerantany. Ny hetra any UK, Canada ary Aostralia no mizaka ny mponina ao na aiza na aiza toerana misy ny kaonty. Noho izany dia zava-dehibe ny manaraka ny lalàna ary ahazoana torolàlana momba ny hetra sy ny ara-dalàna.
Satria mazàna ny sandan'ny fandidiana matetika, ny banky any ivelany dia matetika manome zana-bola avo kokoa noho ny banky an-trano. Ireo banky amoron-dranomasina dia afaka manolotra fiarovana raha mipetraka amin'ny firenena tsy manana vola tsy maharitra na tontolo iainana ara-politika ianao. Raha ity ianao, ny fametrahana ny vola any amoron-dranomasina dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hiarovana ny fampiasam-bola. Manahy momba ny mpitsara eo an-toerana manafaka ny kaontinao amin'ny banky ve ianao? Matetika no tena sarotra atao rehefa mitazona amina banky any ivelany ny volanao.
Betsaka ny olona manana namana sy havana any an-tany hafa. Kaonty any ivelany ihany koa no toerana tsara itahirizana vola raha te handefa vola aminy izy ireo. Angamba ny olon-tianao iray mipetraka any an-tany hafa no namela anao ho lovanao. Raha izany no izy, ny fanokafana kaonty ao amin'io firenena io no fomba tsotra indrindra ahafahana miditra amin'ny volanao. Moa ve ianao manao dia lavitra any amin'ny toerana sasany any ivelany? Azonao atao ny misoroka ny tsy hitondrana vola be miaraka aminao mandritra ny dia. Raha izany dia afaka misafidy kaonty banky vahiny ianao.
Nahoana no Manokatra kaonty Offshore?
Ny kaonty amin'ny banky iraisampirenena ataon'ny orinasa any ivelany sy / na ny fahatokiana dia miaro tena amin'ny fiarovana fananana manokana. Rehefa miteny ny fitsarana any an-toerana hoe "avereno ny vola," dia mety handà ny hanaraka ny orinasam-pianarana any ivelany. Izany no antony mahatonga ny kaontin'ny banky iraisampirenena miaraka amina tahiry fiarovana fiarovana any ivelany izay mahery vaika indrindra.
Ny fomba fitantanana ny banky dia fomba iray lehibe ihany koa handraisana anjara amin'ny fampiasam-bola amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ity fikambanana ity dia manokatra kaonty amin'ny banky amin'ny sehatra iraisam-pirenena lehibe rehetra ary miasa toy ny azo fidiana introducer ho an'ny banky matanjaka indrindra ao Soisa.
Ny iray amin'ireo tohan-kevitra matanjaka indrindra amin'ny fananganana kaonty banky any ivelany dia ny fanavahana. Ny portfolio iray misy boribory dia matetika misy stock, famatsiana, fananana, trano metaly sarobidy ary ny toy izany. Izany hoe, ny fampitomboana ny fananana dia tsy hoe mihoatra ny fametrahanao ny volanao amin'ny saranga samy hafa. Midika ihany koa izany ny fanitarana ara-jeografika sy ny geopolitika, izay azonao tratrarina miaraka amin'ny kaonty any ivelany. Aza hadino hatrany fa ny trosam-pirenena amerikana amin'izao fotoana izao dia avo indrindra, avo ambonin'ny $ 22 trillion ho an'io fanoratana io. Ireo isa ireo dia midika fa na Etazonia aza dia marefo. Ny UK dia X 2.2 trillion ($ 8 trillion) amin'ny trosa. France sy Alemana dia mihoatra ny € 4.5 trillion ($ 5 trillion) amin'ny trosa.
Noho izany, ny fananana vola any am-pianarana dia fomba iray ahafahanao miantoka fitandremam-bola bebe kokoa. Raha ny volan'ny firenentsika dia mitsentsitra ny trosa bitro, tsy tianao ny hitondra azy ireo. Noho izany, raha manana vola any amin'ny faritra azo antoka kokoa ianao rehefa misy ny fianjerana ara-bola ao an-trano, dia hahita endrika tsara kokoa noho ny mpifanila trano aminao ianao. Na izany aza, nahemotra ny Standard & Poor satria amerikana ny trosa tafahoatra. Tsy misy afa-tsy 16 S&P AAA firenena manerantany. Tsy US ny iray amin'izy ireo.
Mifidy ny vola
Tsy tahaka ny ankamaroan'ny kaonty amerikana, banky iray any ivelany izay ahafahanao misafidy eo amin'ny vola samy hafa izay itazonana ny volanao. Betsaka ny mpamatsy vola te-hitazona fananana amin'ny vola isan-karazany. Vokatr'izany dia tsy mihena intsony izy ireo raha mihena ny herin'ny fividianana dolara.
Na izany aza, raha betsaka ny tombony azo amin'ny fifidianana eo amin'ny vola samihafa, dia misy ihany koa ny tsy fahampiana. Azonao atao ny mamarana amin'ny alàlan'ny hetra avy amin'ny vahiny amin'ny tombotsoa azonao. Raha toa ny firenena izay manana vola nampiasainao dia niaina fitsangatsanganana, azo atao ny mandany vola. Midika izany fa mety hianjera ny sandan'ny vola ao amin'ny kaontinao. Misy foana ny fahafahana manova ny fitondrana ao amin'ny firenena, ary ny fanindrahindrana ny banky any aoriana.
Ity farany dia tsy azo inoana loatra amin'ny ankamaroan'ny firenena. Aza hadino hatrany fa ny firenena maro no tsy manana hery matanjaka any amin'ny tontolo iainana any Etazonia. Araka izany, mitombo kely ny tsy fahazoana ny fangalarana ny maha-izy azy na ny heloka bevava. Ankoatra izany, firenena maro dia tsy mitovy lalàna miaro ny mpanjifa toa an'i Etazonia. Hanadihady momba ny lalàna momba ny fiarovana ny mpanjifa iray alohan'ny hisokafany kaontin'ny banky vahiny. Tsara kokoa, mifandraisa amina fikambanana manana traikefa amin'ny fanokafana kaonty any ivelany. Ny fikambananay no lehibe indrindra eran'izao tontolo izao hanampiana ireo olona mila kaonty amin'ny banky iraisam-pirenena.
Ny fanovana vola vola iray ho an'ny iray hafa matetika dia misy vidiny fifanakalozana. Ny saram-pifanakalozana dia mijanona ho singa tsy tapaka amin'ny fiovam-bola. Izany no antony mahatonga ny ankamaroan'ny olona manao ny varotra andro forex ho paikady fampiasam-bola matetika dia very.
Noho izany, ny antony etsy ambony dia manohana mafy ny antony maha-zava-dehibe ny fananana fanampiana matihanina rehefa manokatra kaonty any ivelany. Fantatry ny matihanina ny banky no nitondran'ny banky ny mpanjifanay. Fantatray hoe iza ny banky manokatra kaonty ho an'ireo olona monina ao amin'ny firenenao. Ankoatra izany, ny fiarovana banky dia faniriana mafy ny mpanjifanay. Noho izany, dia manao fikarohana tsy tapaka ny solon'ny banky isika alohan'ny hanoroanay azy ireo. Manoloana izany rehetra izany, tsy ny banky rehetra no mifarana toy ny lozisialy. Raha izany dia misy isa eo ambony aminao horesahanao amin'ny matihanina. Raha tsy izany, azonao atao ny mameno ny fangatahana consultation maimaim-poana amin'ity pejy ity.
Afaka mamatsy vola ny kaontinao any ivelany ianao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny famindrana tariby amin'ny alàlan'ny kaontinao amin'ny banky an-trano mankany amin'ny toeranao any ivelany. Misy fiheverana kely momba an'io famindrana io rehefa atao any amin'ny banky any ivelany, ary mahaliana ny sarany. Tsy toy ny famindrana tariby vita eo anelanelan'ny banky an-trano, ny famindrana tariby iraisam-pirenena indraindray dia misy sarany aloa amin'ny mpanjifa na alefa ny vola na voaray. Tsy misy ny saram-bola mahazatra, ka ny mpanjifa iraisam-pirenena mety manana banky dia tokony hikaroka ireo andrim-panjakana manolotra tolotra tsara indrindra. Marihina fa tsy fahita matetika (ny fisavana) ny banky any ivelany. Noho izany, ny safidy tsara indrindra dia famindrana tariby.
Ny famerenam-bola avy amin'ny kaontinao any ivelany dia tsotra kokoa. Ny anton'izany dia satria ny bankinao dia tokony hanome karatra na carte de debit. Amin'izay, dia afaka miditra manerantany ny volanao. Ankehitriny, ireo fifanakalozana ireo dia iharan'ny vidim-pidirana ihany koa. Tsy fahita firy, ny banky any ivelany no hanolotra fisavana, saingy tsy fomba mety amin'ny fisintonana vola ho an'ny mpanjifa maro izany. Rehefa manadihady fisavana amin'ny mpanjifa ny banky iray any ivelany dia mihena ny tsiambaratelo. Sarotra ihany koa ny famatsiam-bola anaovana taratasim-bola anaovana banky vahiny an-trano. Ankoatr'izay, ny famatsiam-bola amin'ny kaonty toy izany dia mety mitaky fotoana ela miandry.
Ny safidy tsara dia mampiasa kaonty roa, amin'ny banky an-trano sy any ivelany. Amin'ny alàlan'ny famindrana tariby, afaka mandefa vola amin'ny kaontinao any ivelany ianao amin'ny banky an-trano. Tsy olana ny fahazoana ny vola entinao. Mbola mankafy ny fiainana manokana an'ny alàlan'ny kaontinao any ivelany ianao raha manararaotra ny seranana ao an-trano.
Fandaniana eo an-toerana
Rehefa manao ny fikarohana momba ny kaonty any ivelany ianao dia diniho ny hetra eo an-toerana. Ny ankamaroan'ny banky any amoron-dranomasina izay ampiasainay dia tsy mampandoa hetra eo an-toerana amin'ny kaonty vahiny, tahaka ny an'ny hafa. Ohatra, raha mitana kaonty any Switzerland any dolara amerikana ianao dia tsy misy hetra any Soisa. Raha misy kaonty any Soisa, dia mandoa hetra any Soisa ny tompon'andraikitra.
Noho izany, mety hidika izany fa miafara amin'ny fandoavan-ketra tsy ho an'ny firenenao ianao, fa any amin'ny firenena izay andoavanao vola. Matetika ianao dia manaisotra ny hetra any ivelany amin'ny volavolan-dalàna momba ny hetra any an-trano, noho izany dia tsy miandany ny vokatra.
Ny kaonty banky iraisampirenena dia iray ao amin'ny firenena iray ivelan'ny sisin'ny firenenao. Miaraka amin'ny fitokisana fananana ivelan'ny tanàna dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hiarovana izay anao. Ny banky any ivelany dia miaro ny fahazoan-dàlana amin'ny alàlan'ny fanarahana ny lalàna ho fantatry ny mpanjifa. Midika izany fa tsy maintsy manome ny antontan-taratasy ara-dalàna omen'ny banky ianao.
Ny fampiasana ny vola ao amin'ny kaontinao any ivelany dia tsotra tahaka ny famaizana ny karatra debité. Ny fandefasana sy fandraisana vola avy amin'ny kaontin'ny banky iraisam-pirenena dia mora tahaka ny fanaovana famindrana tariby.
Te hanokatra kaonty any ivelany ve ianao? Raha izany no izy, azafady azonao atao ny mampiasa nomerao finday etsy ambony. Azonao atao ny mameno takelaka iray amin'ity pejy ity hahazo fampahalalana bebe kokoa, ora 24 isan'andro.
<Ho an'ny toko 2
Ho an'ny toko 4>